Nhau - Dai ndaigona kukurudzira chete chigadzirwa chekuchengetedza ganda, ini ndaikurudzira Shea bata pasina kuzengurira!
Yakasiyana siyana yakashongedzwa mhando dzese dzemhedzisiro zvigadzirwa ekuchengetedza ganda akaedza akawanda, taura chokwadi iyo mhando ine kure kwazvo mutengo musiyano hainawo yakajeka mhedzisiro mhedzisiro.
Vakadzi vanotenga zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda, vanogara vari mu "edza", uye kuora mwoyo kwechigadzirwa chekuchengetedza ganda, asi havagone kudzikisira kuda kwedu kuyedza mhando nyowani!
Zvichida ichi ndicho chimiro chevakadzi!
Asi Shea ruomba, mafuta echisikigo emuriwo ane zvinoratidzika sezviri nyore zvinhu, akachinja maitiro andakatarisa pakubudirira kwezvigadzirwa zvekuchengetedza ganda.
Ngatitarisei kuti shea bhotera chii!
Shea ruomba rudzi rwemichero yemusango muchero muAfrica kwemazana emakore. Iyo yakachena chaiyo yemiriwo mafuta yemafuta ayo anotorwa uye akaomeswa neakasarudzika matsva tekinoroji nzira.
Kurongeka kwayo kukuru kunoumbwa nemhando dzakasiyana-siyana dzesaturated fatty acids, vitamini C, muchero acid, inotapira uye yakaoma ester acid, linseed mafuta uye zuva firita chinhu.
Yakapfuma mune zvinovaka muviri, ine yakakosha mhedzisiro pakutarisirwa kweganda!
Chave chiri runako hunyengeri kwemazana emakore mu Africa uye iko zvino chave kushandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvekuchengetedza ganda kubva kumakuru makuru pasi rese.
Sangano reNational Center for Biotechnology Ruzivo rakaburitsa chidzidzo chinoratidza kuti shea bota rinova iro sosi yakakosha yemishonga inorwisa-kuzvimba uye inorwisa bundu.
Chimwe chidzidzo, chakaburitswa muAmerican Journal yeHupenyu Sayenzi, chakati shea bhotoro yakawedzera kugadzirwa kwecollagen uye yakaratidza kupokana nekukwegura.
Izvo zvisinga-saponifiable zvinongedzo mune shea bhotoro, 1-10 nguva yemafuta chaiwo emuriwo, anogona kukurumidza kuumba firimu rekudzivirira paganda pekunze, kunyorovesa, sunscreen yekudzivirira mhedzisiro yakakosha.
Nekuda kwehunhu hwayo hunyoro, shea bata inokodzera ganda rakaomarara, kusanganisira ese marudzi evana uye ganda remwana, akapfava uye asingatsamwise. Zvekushandisa kwevakuru, zvinogona kuchengetedza kusimba kweganda.
Rarama kuchamhembe uchasangana nemhepo yakaoma, ganda rechiso richabvisa chiitiko. Mune ino kesi, shea bata isarudzo iri nani.
1. kugadzirisa basa: bvisa mavanga, pitting, isina kukwana, acne, nezvimwe.
Shea bhotela rine basa rekusimbisa ganda rekuvandudza patsva!
Iyo inoshanda kune kukuvara kweganda uye mavanga anokonzerwa neacne, kuvhiyiwa, kutsva, huku,, maronda uye kucheka.
Iyo inonyungudutsa misoro mitema, inodzikira pores, inobvisa matsvuku mavara, uye ine yakakosha mhedzisiro paganda risina kuenzana.
Iyo ine simba yekuvandudzwa kwemasero uye maronda ekuporesa zvimiro zve shea bota zvinobatsira mukukura kwehutano, hwakajairika ganda uye kutsiva zvinyama zvinyoro.
Kwete chete iyo inovaka zvakare yakanganisa zvivakwa zveganda, asi zvakare inovandudza ruvara rweganda uye kusimba.
Shea ruomba runogona kugadzirisa uye kutsiva rakabvaruka ganda rinenge, zvinobudirira kudzikisira kutaridzika kwemaatrophic mamaki, kudzikira kubvisa kutambanudza mamaki, uye kupa ganda riine mwero.
Zvakanaka kutaura kuti shea bhotela rinogona kugadzirisa angangoita ese akajairika matambudziko eganda!
2.Skin kuomesa uye kuunyana kubvisa basa: kudzivirira ganda kuchembera
Shea bhotoro inowedzera kugadziridzwa kweganda nekuvandudzwa nekusimudzira chiitiko chemasero epidermal, nekudaro kumisa uye kudzoreredza chaiwo zviratidzo zvekukwegura kweganda semakwenzi, kuunyana kwakatenderedza maziso uye ganda rinonamira!
Sezvo kuchembera kunonyangarika, ganda rechiso rinozoita rakatsetseka uye rakasimba.
3.Kuchenesa basa: kuderedza pigmentation, kupera mavara, uye kubvisa denderedzwa remaziso erima
Shea bhotela inosimudzira kugona kweganda kukura maseru matsva, ichideredza pigmentation sezvo maseru matsva anotsiva ekare.
Shea ruomba runogona zvakare kudzikamisa makanda eganda anokonzerwa nekuratidzwa nezuva uye nhumbu, kugadzirisa ganda rakatsva nezuva, kurerutsa nzvimbo dzine rima uye mabara, uye kudzorera ganda nyoro uye chena.
4.Apply yakatenderedza maziso inogona zvakare zvinobudirira kubvisa rima madenderedzwa.
Nutritional moisturizing basa: moisturize ganda rakaoma zvakare
Ganda rako rinogadzira zvakapetwa kagumi mafuta mu40s uye 50s pane zvaari kuita muma20s ako. Izvi zvinogona kutungamira mukuoma, kupera mvura uye kuunyana nekuda kwekudzikiswa kwekugadzirwa kwemafuta uye kurasikirwa kwekuchengetedza hunyoro.
Shea bhotoro rinodzosera rakaringana muyero pakati pemafuta acids nemvura uye rinodzorera hunyoro kuomesa ganda.
Yakanaka kwazvo kuchengetedza hunyoro hweganda, kumisikidza matishu, nyore kupinza iyo dermal layer, inonwisa uye inotsvedza ganda.
5. Chengeta bvudzi rako
Iyo inodzosera kubwinya uye echisikigo kuchinjika kune bvudzi, kunyatso kuvandudza maratidziro uye chitarisiko chebvudzi rakakuvadzwa nemafuta, kuchenesa, kuomesa-kuomesa, kuwandisa kwezuva kwezuva uye zvimwe zvinhu zvakashata zvezvakatipoteredza.
Anogona here munhu weganda rine mafuta kushandisa shea butter?
Tenda kuti dambudziko iri riri kuvhiringidza munhu ane ganda rakawanda rine mafuta, achitarisa mashiripiti ezvese marudzi emafuta anodzivirira ganda, asi kunetseka zvisinei "ane mafuta" anodzokera kumashure.
Uku kwakajairika ganda kusanzwisisa!
Chaizvoizvo, izvo zvinonzi ganda rine mafuta rinopa mafuta kazhinji nekuti ganda rinoshaya rinoda "girizi" nzvimbo inokonzereswa!
Oiri chikamu chakakosha cheganda, kana ganda racho risina mafuta, kuoma, kuunyana uye kuwanda kwematambudziko kunoitika.
Iye munhu weganda rine mafuta ari kuenda kumafuta uye yakanyanyisa kuchena ganda, kukonzera oiri ichiwedzera uye chiitiko panzvimbo, ichi ndicho chikonzero chekuti nekuti girisi harikwani uye ganda rinogona kuzvibudira roga.
Kana vanhu vane ganda rine mafuta vakashandisa zvakanaka zvigadzirwa zvine mafuta zvekuchengetedza ganda kuti vawedzere mafuta anodikanwa neganda, vanogona kudzora zvinoitika zvekunyanyisa kwemafuta eganda.
Nekudaro, vanhu vane ganda rine mafuta vanogona kushandisa shea bata.
Nekudaro, zvichienzaniswa neganda risingapindiri uye rakaoma, zvinokurudzirwa kuti kushandiswa kwese hakufanirwe kupfuura saizi yezviyo zvesoya, kana kusanganisa nezvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda kuti ushandise mhedzisiro zvakare yakanaka kwazvo.
Unyanzvi hwekushandisa Shea Butter
Chekupedzisira, ini ndinopfupikisa iwo matipi iwe aunogona kunge usingazive nezve kushandisa shea bata kuti uwedzere mhedzisiro!
1. Ive neshuwa yekudonhedza muchanza uye kukwiza kupisa: mushure mekuchenesa, tanga daub toner, wobva wadonhedza saizi saizi shea mafuta bhotela muchanza, sanganisa kupisa, wozokwiza kumeso!
Rangarira kusaisa zvakananga kumeso, nekuti zviri nyore kushandisa isina kuenzana yemari huwandu hunokonzerwa nezvakawanda uye acne kuputika kwechiitiko.
Bvisa kupisa muchanza cheruoko rwako wozvizora pamusoro pechiso chako, izvo zvinokwanisa kudzivirira mamiriro aya.
2. Iva nechokwadi chekushandisa masaji: Vanhu vazhinji vanogona kungozora shea bata kumeso kwavo uye vofunga kuti zvese zvichave zvakanaka.
Chaizvoizvo, chero mhando yemafuta inodzivirira ganda inofanirwa kushandira pamwe nekukwiza ipapo inokwanisa kuve nemhedzisiro yakanaka.
Massage kwemaminetsi 1-2 nguva imwe neimwe.
Massage inogona kusimudzira kutenderera kweropa, kunyatso simbisa iyo shea butiro yekumwa mhedzisiro!
3. Rishandise netauro rinopisa kuti riite zvakapetwa kaviri!
Mushure mekuisa shea bata uye kukwiza kumeso kwako netauro rinopisa kwemaminetsi 1-2, zvinobatsira kuvhura pores uye kuwedzera kunwa!
Mushure meizvozvo, isa iyo inotonhora compress kune tauro nemvura inotonhorera kuti ubatsire kuvhara iyo pores!
Iwe unozoshamisika kuona kuti ganda rako rakatsvuka uye rakapfava!
Kwakaita sekubuda musalon inonaka!
Kana iwe usingatendi ini, ingozviedza!
4. Isa mamwe mafuta akakosha kuti ushandise pamwe chete: Shea bhotela ndiyo mafuta epasi. Iwe unogona kuendesa mamwe akakosha mairi pamwe chete maererano nemanzwiro ako, uye mhedzisiro yacho zvakare yakanaka kwazvo.
Semuenzaniso, wedzera madonhwe mashoma erosi akakosha mafuta kune shea bata, izvo zvinogona kushanda zvakanyanya kurwisa kuchembera uye kutsvuka ganda.
Wedzera mafuta elavender kana tii muti wakakosha mafuta kurwisa acne.
5. Shandisa usati waita iyo masiki: vanhu vazhinji vanoisa iyo masiki zvakananga mushure mekuchenesa. Muchokwadi, iyo nzira kwayo ndeyekuisa iyo toner kutanga mushure mekuchenesa, uye wozoisa iko iko, uye pakupedzisira shandisa masiki!
Nhanho yemvura yakasviba inogona kutsiviwa ne shea bhotela, gare gare kukwira zvakare woisa kumeso kumeso, unogona kushamisika kuwana, iyo inonwisa mhedzisiro yechiso kumeso inogona kupetwa, ganda rinobvisa mvura kushongedza, richiri kugona kuzara nekutsva kunzwa!
Iyi ndiyo chete mask isingakwanise kuzadzikisa mhedzisiro!
Shea bhotela rinoita zvishamiso paganda rako!
Mushure mekushandisa kwemwedzi mumwechete kuti unzwe shanduko dziri pachena muhunhu hweganda!
Ini handina kunyanya kunzwa kwekuchenesa, asi pakugadzirisa kumeso kweganda matambudziko, maitiro acho akakosha: acne mamaki, mavara, anozopera zvishoma nezvishoma nekushandisa nguva!
Manzwiro makuru mukuita kwekushandisa ndeaya: ganda rinozoita rakatsetseka, rakapfava uye rinopenya.
Inokurudzirwa kune vese vakadzi vari kutsvaga runako, zvisinei kuti zera rako kana mamiriro eganda, Shea ruomba ndiye akakodzera wekuchengetedza ganda shamwari.
Shea bhotela muviri wakateedzana:
1.Shea ruomba ruomba ruwoko, 75g
Mazuva manomwe eganda rakanaka rinodzivirira
Maawa masere emunyoro, kukurumidza kutora
Kunze kwekunze, njodzi dzematambudziko emhasuru: yakaoma uye inotonhora mamiriro ekunze, kuomesa kuomesa, kuchenesa zvakanyanya, kutsvuka kunonoka, kuenderera kwezuva kubuda, mitsara yakanaka kukwegura.
Maitiro ekushandisa zvigadzirwa zvekunyorova hazvishande! Nekuti, chipingaidzo chako cheganda chakakanganiswa!
Ganda rakakuvara rinogona kutungamira kukurumidza kuyerera kwemvura, iko kwekunze kukuvara kwakadzika.
Uye ganda iro rine chipingamupinyi chekudzivirira rinogona kudzivirira mwando kurasikirwa, ramba kunze kupindira pa.
Inokubatsira iwe kuchengetedza ganda rinodzivirira kwemazuva manomwe.
Yakapfuma muzvinhu zvisingaonekwe, inogona kuzadza iyo interstitium yemasero, inosimbisa zvakanyanya uye kugadzirisa, chengetedza ganda kusununguka.
Yakazara vhitamini E, inova antioxidant ine simba.
2.Shea Butter Muviri Wakawanda, 30g / 50g / 100g
Inokodzera yakajairwa ganda + yakaoma ganda
Kunyorovesa, kupa hutano uye kusakora kwemaawa makumi mana nemasere
3.Shea ruomba rwescreen cream, 30g / 50g
Inoshanda kune zvigadzirwa zvezuva uye zvigadzirwa zvemashure-zvezuva
4.Shea butter shampoo uye bvudzi gadziriro, 30g / 50g / 100g / 200g / 250g
Nutritional shampoo uye makomeshita ebvudzi rakaoma, post-dhaya zvigadzirwa zvekuchengetedza bvudzi
5.Shea ruomba kumeso kirimu, 30g / 50g
Inokodzera zvigadzirwa zvinopesana nekukwegura, husiku kirimu, ganda rakaomarara uye zvigadzirwa zvakaomarara zvekuchengetedza ganda, zvigadzirwa zvechando
Inokodzera nyoro chitsitsinho uye tsoka tsoka.
6.Shea ruomba muromo mask, 30g / 50g
Inokodzera chikafu chemuromo uye kuneta.
7.Shea ruomba mwana cream, 30g / 50g
8.Shea ruomba mvura hwaro, 30g / 50g
Inoderedza kuoneka kwemitsara yakanaka uye inoshandura kumeso kwako kuita isina chayakatsetseka uye yakatsetseka kanivhasi kuitira kuti zvigadzirwa zvienderere zvakaenzana kumagumo anogara kwenguva refu.
9.Shea ruomba muromo kukwesha, 30g / 50g
Miromo yekukwiza kweinyoro uye inovaka exfoliation
10.Shea bhata tsoka tsoka, 30g / 50g
Tsoka kukwesha kwekunyorovera uye kunovaka exfoliation
11.Shea ruomba rutsoka ruomba, 30g / 50g